गब्बरलाई किन भएको थियो सजाय ? यूपी पुलिसले दियो यस्तो जवाफ | गब्बरलाई किन भएको थियो सजाय ? यूपी पुलिसले दियो यस्तो जवाफ – हिपमत
भारतको उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस आजकल सिर्जनात्मक देखिँदै छ । यूपी पुलिसले कोरोना संक्रमणको खतराबारे जागरुक गर्नका लागि एक प्रवर्द्धनात्मक भिडियो शेयर गरेको छ । यस भिडियोमा यूपी पुलिसले सोलेका खलपात्र गब्बरको एक दृश्य देखाएको छ । जहाँ, गब्बरले थुकेका छन् । त्यसपछि ठाकुर अर्थात सञ्जवी कुमारले गब्बरलाई लखेट्छन् अनि उनलाई समातेपछि आफ्नो हातले गला दबाउँछन् ।
यस दृश्यको सुरुवात गब्बरले थुकेपछि हुन्छ । त्यसपछि सञ्जीवले उनलाई खेद्छन् । फिल्मको वास्तविक दृश्यलाई हल्का एडिट गरेर यूपी पुलिसले यो भिडियो तयार गरेको हो । कोरोनाबाट मानिसहरुलाई जागरुक गर्नका लागि गरिएको यो सिर्जनशील प्रयासको धेरैले प्रशंशा गरिरहेका छन् ।
भारतका दिग्गज अभिनेता अनुपम खेरले पनि यो भिडियोलाई लाइक गरेका छन् । यस भिडियोको क्याप्सनमा यूपी पुलिसले लेखेको छ, ‘गब्बरलाई कुन कुराको सजाय मिल्यो ?’ भिडियोमै यूपी पुलिसले खुला स्थानमा नथुक्न चेतावनी सन्देश पनि जारी गरेको छ ।
चेतावनी सन्देशमा भनिएको छ,‘सार्वजनकि स्थानमा थुक्दा कोभिड १९ फैलने खतरा बढ्नसक्छ । यो एक दण्डनीय अपराध हो । सार्वजनिक स्थलमा नथुकौं ।’
ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले यस भिडियोलाई सिर्जनशील भन्दै प्रशंशा गरेका छन् ।
सोले फिल्मलाई लिएर अभिनेता अमिताभ बच्चनले पछिल्ला दिन आफ्नो रियालिटी शो कौन बनेगा करोडपतिमा रोचक खुलासा गरेका थिए । एक दृश्यको सुटिङका दौरान धेरैपटक टेक दिनुपरेपछि हैरान भएर गोली नै चलाएको उनले बताएका थिए । गोली उनको कानको निकै नजिकबाट गएको थियो र उनी भाग्यवस बाँचेका थिए । यस फिल्ममा अमिताभ बच्च र धमेन्द्र मुख्य भूमिकामा थिए ।
अमिताभलाई फिल्ममा आबद्ध गर्नका लागि धमेन्द्रले नै सिफारिस गरेका थिए । जुन कुरा अमिताभले पनि स्विकारेका छन् । यद्यपी, आफ्नो करियरमा कयौं दशक बिताएपछि मात्रै अमिताभले यो कुरा स्विकारेका थिए ।